यिनै यूवा नेता हुन् ,जसले शुरु गरे निःशुल्क एम्बुलेन्स सेवा,सलाम नेता ज्यु! सम्मान स्वरूप सबैले १ सेयर गरौ!! – Sandesh Press
May 16, 2021 367
यिनै यूवा नेता हुन् ,ज’सले शुरु गरे निःशुल्क एम्बुलेन्स से’वा,सलाम नेता ज्यु! स’माजसेवी एवं नेपा’ली काँग्रेसका युवा नेता राजीव विक्रम शाहको विशेष सह’योगमा निःशुल्क एम्बुलेन्स सेवा शुरु भएको छ । भेरी नगरपालिका वडा नं ४ का वडा अ’ध्यक्ष खम्बजंङ्ग शाहको समन्वयमा पुर्व सभासद राजीव बिक्रम शाहको सक्रियताबाट एम्बुलेन्स गाडी सुरु गरिएको हो ।
यसैगरी नेपाली काँग्रेस जा”जरकोटका ने”ता बेदराज सिंहको मोवाइल नं. ९८५१००७६७१ सम्पर्क गर्न सकिन्छ । यस्तै एम्बुलेन्स सेवा सह’जीकरणका ला’गि काँग्रेस जा’जरकोटका नेता तेजविक्रम शाहको मोवाइल नं. ९८६८११७७७७ मा सम्पर्क गरेर सेवा लिन सकिने व्यवस्था मिलाइएको छ ।यिनै यूवा नेता हुन् ,ज’सले शुरु गरे निःशुल्क एम्बुलेन्स से’वा,सलाम नेता ज्यु! स’माजसेवी एवं नेपा’ली काँग्रेसका युवा नेता राजीव विक्रम शाहको विशेष सह’योगमा निःशुल्क एम्बुलेन्स सेवा शुरु भएको छ । भेरी नगरपालिका वडा नं ४ का वडा अ’ध्यक्ष खम्बजंङ्ग शाहको समन्वयमा पुर्व सभासद राजीव बिक्रम शाहको सक्रियताबाट एम्बुलेन्स गाडी सुरु गरिएको हो ।
Nextएकदिनको अन्तरालमै आमा बाबुले संसार त्यागेपछि सबै थोक गुमाएकी छोरी रसियाले लेखिन सबैलाई रुवाउने स्टाटस